wararka maanta-arlaadii.net » Ciimadam Alshabaab Oo Weeraray Xarun Ciidamo Oo Ku taal Jubada Hoose
Xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa ay weerar dhawr jiho ah ku qaadeen ciidan isugu jira kuwa Danab iyo Mareykan oo ku sugan duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaan deegaanka Baar-sanguuni oo fariisin u ah ciidankaasi.
Dadka deegaanka ayaa waxa ay inoo sheegeen in ay arkeen xoogag Shabaab ka tirsan oo weeraray deegaanka, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo dhinacyadan ay isku adeegsadeen hubka nuucyadiisa kala duwan.
Dagaalka oo socday wax ka badan saacad ayaa markii dambe iskiisa u istaagay, balse weli waxaa aaggaasi laga maqlayaa rasaas goos goos ah oo dhinacyadan dhexmareysa.
Ilo dhinaca Millitariga ah ayaa inoo sheegay in dagaalkaasi lagu dilay ilaa Afar askari oo Soomaali ah, kuwaasi oo meydadkooda la qorsheynayo in loo soo galbiyo dhanka magaalada Kismaayo.
Illaa hadda ma jirto cid si sax ah u xaqiijin karta khasaaraha dhabta ah ee dhinacyadan iyo dadka deegaanka ka soo gaaray dagaalkan oo ahaa mid qorsheysan.
Ciidan gurmad ah oo ka ambabaxay Magaalada Kismaayo ayaanan gaarin deegaanka dagaalka uu ka dhacay, sababo ku aadan inay ka cabsi qabaan in dagaal uu wadada ku qabsado iyo miinooyin halkaasi kula qarxaan.
Xaalada deegaanka Baar-sanguuni ayaa caawa waxa ay tahay mid kacsan
Madaxweye Farmaajo oo La kulmay Wakiilo ka socday Qaramada Midoobay